Eoropa Belzika Ostend
Adiresy: Kon. Astridlaan 7, 8400 Oostende, Belzika
Phone: +32 59 80 66 44
Ny ora fiasana: 11.00 - 19.00
Ny lapa goavam-be ao amin'ny Ostend Belzika dia tsy iray amin'ireo tanàna mahaliana indrindra ao an-tanàna ihany, fa koa ny toeram-pitsaboana lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Ny tranobe amoron-dranomasina dia manakaiky ny ranomasina ary mifototra amin'ny rafitra tsy mahazatra, tantara izay nahatonga ireo mpitondra fanjakana nandray anjara. Ireo zava-misy ireo dia tsy nahamarika an'ireo mpizaha tany izay maniry ny ho tonga eto.
Inona no mahaliana momba ny lapa?
Tamin'ny taonjato faha XIX, ny tanànan'i Ostend dia nalaza ho tanàna fananana tsara tarehy, izay indray mandeha no nahafahana nanangana ny Mpanjaka Leopold II. Ny toerana teo an-toerana dia nampiaiky volana ny mpanjaka ka nandidy ny hanorina ny Palace Thermal ao Ostend. Koa satria manana loharanom-baovao marobe amin'ny rano fanasitranana sy ny rano ny tanàna, dia nanapa-kevitra ny hampiasa izany amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany. Tsy ela dia tonga tany amin'ny toeram-pitsaboana ny mpitondra avy amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina, mpanankarena sy olo-malaza, anisan'izany ny poeta Rosiana malaza Nikolai Vasilyevich Gogol.
Amin'izao fotoana izao dia tsy malaza intsony ny fitsangatsanganana an-tanàn-dehibe, saingy ny ezaka ataon'ny fanjakana dia manao ezaka mba hiantohana fa tsy miova ny fahalianana amin'ity toerana ity. Androany, akaikin'ny Lapan'ny Thermal ao Ostend, misokatra ny chic Thermae Palace Hotel, misy dobo filomanosana, zaridaina japoney kely iray tapaka, asa tanana iray no miasa. Eo ambanin'ireo arivoarivo any amin'ireo toeram-pitsaboana dia afaka mahita fampiratiana asa nataon'ireo mpanakanto vaovao sy mpaka sary matetika ianao.
Afaka mandeha any amin'ny tobim-pahasalamana amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka ianao . Any akaikin'ny Lapan'ny Thermal dia misy ny bisy "Oostende Sportstraat" sy ny lalana - "Oostende Koninginnelaan", ny lalana an-tongotra izay tsy haharitra 15 - 20 minitra. Afaka miditra ao amin'ny Lapam-pandehanana Thermal isan'andro ianao ny 11:00 hatramin'ny 19:00. Sarotra ny fidirana amin'ny sokajy rehetra.
Museum Bedřich Smetana
Tranombakoka archaolojia (Budva)
Elektrika mpanamboatra kiraro
Mamela voaloboka amin'ny ririnina tsy misy fanakanana
Lamina fanatanjahan-tena eo amin'ny lakozia - ahoana no fomba hifidianana loko tena tsara?
Diet Simeons miaraka amin'i Anat Stern
Toby fanafody ho an'ny saka
Toetran'ny maraina amin'ny zaza vao teraka
Tontolon'ny fiatrehana ny trano any ivelany
Namoaka ny diariny i Lina Dunham
Jeans amin'ny ankapobeny-shorts
Mikônôma mikorontana mahazatra
Diary "tabilao 3"
Ny akoho hena vita avy amin'ny henam-boankazo - recipe
Fanatanjahan-tena amin'ny gymnastique rhythmique